Fivarotana masin-tsivana amin'ny Marketing Marketing | Martech Zone
Fivarotam-bidy Mass Marketing
Raha mpamaky ny sangan'asa ianao dia fantatrao fa mpanohitra ny mifampitaha amin'ny fampitahana amin'ny marketing. Matetika, toy ny amin'ny personalization, tsy safidy inona no paikady ampiasaina, fa rahoviana no hampiasa tetika tsirairay. Misy ny mampihomehy amin'ity infographic ity dia marketing varotra… Fa manery ny fanatsarana ny maha-izy azy manokana. Samy miasa tsara izy ireo rehefa mampiasa tsara.
Nisy fotoana, ny marketing rehetra dia an'ny tena manokana. Ilay mpivarotra isam-baravarana, mpanafika amin'ny banky, ary haberdasher dia samy nahalala ny anarany avy ny mpanjifany. Ny singa mailaka mivantana dia natao pirinty tamin'ny kinova samihafa mba hanintona ny jeografia na ny safidin'ny mpanjifa. Avy eo, tamin'ny fiandohan'ny mailaka sy tranokala, nanomboka niantehitra tamin'ny teknikan'ny varotra be ny mpivarotra mba hanome hafatra tokana manerana ireo fantsona nomerika vaovao. Avy amin'i Monetate's Infographic Mass Marketing Versus Personalization
Zahao ity infographic ity ary aza hadino ny maka ny ebook an'i Monetate, The Zava-misy amin'ny personalization amin'ny Internet. Novokarina niaraka tamin'ny Econsultancy, ny fikarohana nataon'izy ireo manokana dia manadihady izay mitondra ny personalization an-tserasera, ny tetika sy ny karazana data ampiasaina hanamboarana ny traikefan'ny mpanjifa an-tserasera sy ny sakana amin'ny fahombiazana.
Tags: varotra faobemonetatepersonalization amin'ny Internetpersonalization
Marika, loko ary fihetsem-po
Curalate: fanaovana asa fanarenana ara-tsosialy ho an'ny marika
May 8, 2013 ao amin'ny 5: 47 PM
Rehefa mampiasa haino aman-jery sosialy ny orinasa dia tsy maintsy atao lohalaharana ny laharam-pahamehana. Ny haino aman-jery sosialy dia momba ny fifamofoana sy ny fifandraisan'ny olona sy ny olona. Raha tsy manandrana mifandray amin'ny mpanjifa ny orinasa dia ho very izy ireo.